Meanings of W waags wabbits wabble wackadoos wackily wackjobs wackos wacks wacky wad waddies wadding waddle waddlers waddlingly wade wade wade in wade intsb/sth
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / W
"W" to "wade intsb/sth"
W, waags, wabbits, wabble, wackadoos, wackily, wackjobs, wackos, wacks, wacky, wad, waddies, wadding, waddle, waddlers, waddlingly, wade, wade, wade, in, wade, intsb/sth, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
`W` (နာမ်) # ၂၃ခုမြောက်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ။
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chinlaimal sawm nih leh thumna.
မွန်/Mon(ကြိယာ)t. သကုဪကႜိပပ္၊ သကုဪေအဲျဇ။ (ကြိယာ). ညစ်ပတ်စေသည်။ `
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- waag)
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- wabbit)
ပိုးကရင်/Pwo Kayinဂၭဖၭကံၭကၭကၭကၭ; လံံဲံံ ံ့ၩဆၧကၭကၭကၭကၭ (လၤကးကးကးကး)
ချင်း/Chin(ကြိယာ) i thui hnuapmah i um; wobble ti zongin tialasi kho.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- wackadoo)
နဲနဲရူးသွပ်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည်နှင့် ၊ ina[mildly] [insane] [manner
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- wackjob)
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- wacko)
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- wack)
--wackily; also `whacko` `wacko` - ဗန်းစကား(Adj n Noun) ငကြောင် အကြံညာဏ် ၊ [cockamamie] [goofy] [silly] [zany] [unreasonable] စိတ်မမှန်၊ [balmy] [barmy
ရှမ်း/Shan[ဝၵ်ႉၶီး] ဢၼ်ယွင်ႇ ယီႈယွင်ႇယႅင်ႇ ပျၢၵ်ႈ။
အမြောက်အများ၊ # Maung Jotu hasawad of dollar [note]s.
ချင်း/Chin(နာမ်) thil pakhatkhat nihahei chuahtermi thil ;aphichuak (နာမ်) အကျိုးပေးရလဒ်
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chin1.aloma kizial pat; laidal; na khatpeuh;akilomzial na khatpeuh; 2.akiguang na khatpeuh kiloklok lo-a kip nadinga thekna laidal; laidal lom cihte. v.
မွန်/Mon(နာမ်) သြဟ္၊ တရံင္ထဍဳဟ္၊ တရံင္လဍဳဟ္၊ ပြမဖ်ဳိပ္ကုဪဖုဪ၊ ဒတုဲဖုဪ၊ နိႆန္၊ ၀ိပက္။ vi. ကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္ဖုဪ၊ ဖုဪနိႆန္၊ သၠဳဪဖုဪစိုပ္ကႜဳင္၊ ဒတုဲဖုဪစိုပ္ကႜဳင္၊ သၵးဒုင္၀ိပက္။ resultant (adj) မဒွ္ကဆံင္ဒတုဲဖုဪမစုိပ္ကႜဳင္။ the result of actions. (n) ဖုဪနိႆႏၵ။ the result of sin. (n) ဖုဪသရင္ပါပ္။
ရှမ်း/Shan[ဝွတ်ႉၻ်] လွင်ႈႁေႃႈ/ ပူၵ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႅဝ်၊ ၶူဝ်းယွၵ်းတႃႇဢုတ်းႁူး၊ ၼႅပ်ႇငိုၼ်း၊ ၵဵၼ်ၶူဝ်း/ ၸေႈ။ (vt) ဢၼ်ဢဝ်ဢူၼ်ႈလွင်/ ၶဵၼ်းဝႆႉ။ wadding (n)
မီဇိုချင်း/Mizo(wawd); n. bungraw bawm chhungthuah; tangka note bukthuah; tangka note bukthuah. v.t. chhungthuah.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- waddy)
ဟားခါးချင်း/Haka Chinchangreu pante; Roman Katholik nih Bawipa Zanriah i an hmanmi.
တခုကာကွယ်ရန် သုံးသည့်ပစ္စည်း၊ ထိုးသောဂွမ်း၊
ကချင်/Kachin/Jingphowengwai hkawm ai. hkaipyek zawn gangai hkawm ai.
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chinvatawt pai banga pumpi kisawi; kihei kawma kal tom cikcik suanapai; vatawt pai-a pai. n.
မွန်/Mon(နာမ ဝိသေသန) မဟြံ႐ုဲစႝစ၊ မစဖအုိတ္။ (နာမ ဝိသေသန) အစာမျိုးစုံကို စားသော။ `
ရှမ်း/Shan[ဝွတ်ႉတူဝ်ႇလ်] ပႆၼင်ႇပဵတ်း။ (n) လွင်ႈ….။
ပါဠိ/Palihaṃsagamana. (vi) haṃsagatiyā gacchati. (pp) haṃsagatiyā gata.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- waddler)
ဟားခါးချင်း/Haka Chinchangreu phun khatakuar teteaum mi.
ဟားခါးချင်း/Haka Chinngol ; tuah loin um ;aherh lo ti i ruahpiak
ကချင်/Kachin/Jingpholagaw hte hka rap ai.
စကောကရင်/Sgaw Kayinခီထံ; ဟးလၔအခီၗလၔထံက်ါ
ပိုးကရင်/Pwo Kayinဂၭဖၭလၧထံၫကျၩ (ဟးလၢအခီၣ်လၢထံကျါ)
ချင်း/Chin(ကြိယာ) 1.attha deuh
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chin1. tui lak; buan lak; sehneel lak; vuuk lak leh lopa saau laka pai banga pai; 2. tui dai laka pai; tui ngap; 3. haksa pipi-a maailam manawh-a pai.
မွန်/Mon(ကြိယာ)t.vi. သကုဪေတာတက္ခုိဟ္မုိဟ္ကႜဳင္၊ ခုိဟ္ေတာတက္ကႜဳင္။ improvement (n) ဒဒွ္မေတာတက္ကႜဳင္။
ရှမ်း/Shan[ဝဵတ်ႉတ်] ၶတ်းၸႂ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ/ ၵူမ်ႇ။ wade in/into;ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း/ ထဵင်/ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ wade intosb; ၸႂ်လမ်သေၶဝ်ႈထဵင်။ wadethrough; ၶၢမ်ႇသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေလူ/ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်လီၶၢၼ်ႉဢိူၼ်။ waders (n) သွၵ်းတိၼ်ဢူတ်ႇ။ wading bird (n) ၼူၵ်ႉယၢင်း။
မီဇိုချင်း/Mizo(weid); v.i. (tui) dai; harsa taka kal kai. v.t. dai kai.
ပါဠိ/Palikicchena yāti; jale otaritvā gacchati.
`wade in` # ဝင်တောသည်။
`wade intsb/sth` # အားရပါးရဆော်သည်။